Abenzi base China Precast Block kunye nabathengisi | Umgcini ophezulu
Ibhloko ye-Precast ekwabizwa ngokuba yibhlokhi esele yenziwe engakhange ibumbeke, yenziwe ikakhulu ngeeplastiki ezilahlayo ezinokuphinda zilahlwe. Ulwahlulo lwayo lubandakanya ibhloko enokuqhekeka esele yenziwe kunye neplastiki eyenziwe kwangaphambili; kukho i-aluminate samente, iglasi yamanzi, i-Phosphoric acid kunye ne-aluminium phosphate, ukubopha udongwe kunye neebhloko ezenziwe ngesamente ezisezantsi. ngohlobo lokudityaniswa, lahlulwe laba zi-alumina eziphezulu, udongwe, iisiliceous kunye nebhlorum ezenziwe kwangaphambili; Ngokwendlela yokubumba, yahlulahlulwe yintsimbi yokubumba kunye nokunyanzeliswa kokubumba kunye nokugungqa nokwenza iibhloko esele zenziwe; ubunzima beebhloko ezenziwe kwangaphambili zininzi zeekhilogram ukuya kwiitoni ezininzi, ke zahlulahlulwa zaba ziibhloko ezinkulu, eziphakathi kunye nezincinci; iibhloko esele zikhona zixhotyiswe ngemivalo yentsimbi kunye neeankile, ke zahlulwe zaziibhloko ezenziwe kwangaphambili kunye neebhloko ezenziwe ngentsimbi. Iibhloko kunye neeankile ezenziwe kwangaphambili, njl.
1. Inezibonelelo zokumelana nobushushu obuphezulu, ukumelana nokubola, ukunganyangeki kwe-abrasion, amandla aphezulu, kunye nokuzinza okuhle kotshisa.
2. Ulwakhiwo lulula kwaye kulula, ixesha lokwakha lifutshane, ixesha lokwakha ligcinwa, iindleko zokwakha ziyagcinwa, kwaye indawo yokwakha ayichaphazeleki yindawo yokwakha kunye namaxesha onyaka, iqinisekisa umgangatho wolwakhiwo
3. Ixabiso eliphantsi notyalo-mali olusezantsi
Iibhloko ze-4. Xa kuthelekiswa nezitena ezitshixwayo, inokuwanciphisa amalungu omdongwe, iqinisekise ukuba umoya womlilo ungqongqo, kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kwamandla.
Kwiikhilikhi zeshishini nakwizixhobo ze-thermal, iibhloko zangaphambi kwexesha zisetyenziselwa ukwakha isithando somlilo, esinokuthi siqonde ukuphakanyiswa koomatshini, ukugcina abasebenzi kunye nabasebenzi, ukunciphisa ixesha lokwakha, kunye nokunyusa izinga lokusebenza kwesithando somlilo.
Iibhloko ze-Precast zinokusetyenziselwa ukwakha iitiln ezishushu ezinjengokuvutha komlilo, izitovu eziqhumayo, amaziko okufudumeza umlilo, izithsaba zombane, i-iron ore powder yokugcoba amaziko e-shaft kunye neefreyithi zokubilisa. Ukuza kuthi ga ngoku, iibhloko zangaphambi kokuba zisasazwe ngokubanzi kwiitampu zokuthinta, kwiziko lombane kunye nakwizinto zokubasa. Sebenzisa kwaye udlale indima enkulu.
Ukutshintsha kweMigca esisigxina @ 1,500 ℃ x 2H (%)
I-SiC + C
Egqithileyo Isitena saseMagnesia iDolomite
Okulandelayo: Zokuvala Firebrick
2.ukutyhalwa nokugaywa kwezinto ezimbaxa ezimbaxa.
Ukupakisha emva kovavanyo olusemgangathweni.
Ngeengxowa ezingama-25kg zeeplastikhi zephepha + zolwandle ezifumileyo
Amandla oPhezulu aPhindayo